Merizo Seaside B&B-Yunithi 1 Surfer Suite - I-Airbnb
Merizo Seaside B&B-Yunithi 1 Surfer Suite
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguManuela&Eric
Le ndawo yokuhlala yeholide yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kwendlu yaselwandle izibini okanye iintsapho ezincinci. Yiza ukonwabele ukutshona kwelanga okumangalisayo, bukela iidolphin, i-snorkel, i-kayak kwaye wondle iintlanzi kumda wamanzi wale ndawo ikhethekileyo yangaphambili yolwandle.
Zibekwe kwipropati enye kukho ezinye iiyunithi ezimbini. Iyunithi nganye ilungiselelwe ukunika eyona ndawo inkulu yabucala enomgangatho wabucala, ikhitshi, igumbi lokulala kunye neendawo zeBBQing. Ibekwe kwipropathi indawo yokuphumla eyahlukileyo kunye nohlengahlengiso lwezihlalo ukuze uphumle kwaye wonwabele indawo ekungqongileyo. Ukuhamba ngeKayaking, iijacket zobomi kunye nezixhobo zokuntywila emanzini, kunye neendawo zokuhlambela iimpahla ziyafumaneka ukuze zisetyenziswe ngaphandle kwentlawulo eyongezelelweyo kwaye indawo yokupaka yasimahla inikezelwa kanye kwipropathi. Kumgama okufutshane wokuhamba kukho i-Merizo Pier, indawo entle yokujoyina abantu bendawo yokuqubha kunye nokuzonwabisa. Ukufikeleleka kwakhona ziindawo zembali ezinje ngeFort Soladad, iFaha Caves kunye nokuhamba okumnandi ukuya kumachibi oMbingeleli okanye phezulu kuMlambo iGeus.
4.82 · Izimvo eziyi-245
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi245
I-Merizo yeyona lali yesiqithi i-quintessential enezitrato ezolileyo kunye nabahlali abanobuhlobo. Unxweme alukaphuhliswa kwaye iinduli zisenanto kwaye ziluhlaza :) Ibekwe malunga nemizuzu engama-45-60 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseGuam.
Umbuki zindwendwe ngu- Manuela&Eric
URoisin kunye nosapho lwakhe bahlala eSouthern Guam iminyaka eliqela kwaye banokunceda iindwendwe ngeemfuno zabo zeholide okanye baphendule nje imibuzo njengoko iphakama.